ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အာဖဂန်ဒုက္ခသည်များ လက်ခံရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု လူသန်းပေါင်း (၁,၁၀၀)ကို လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပြီး လူသန်းပေါင်း(၁,၀၀၀)ကျော်မှာ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံထားပြီဖြစ်
မဟာတံတိုင်းကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲ
တရုတ်နိုင်ငံ Tianzhou-3 ကုန်တင်အာကာသယာဉ်နှင့် အာကာသစခန်းပင်မခန်း အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့
သရီးဒီရုပ်ကြွ ပန်းခြံ ဆန်းကျန့် တွင်တည်ဆောက်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပန်းဖြေ နေအိမ်မော်တော်ယာဉ်အား ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် ပြသ
မန်နီ ပက်ကွီယိုက ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတနေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ကြေညာ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အရှေ့ဘက်ရေပြင်အတွင်းသို့ အမျိုးအမည်မသိ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ၂ စင်းပစ်လွှတ်ခဲ့ဟု တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြော
ထိုင်းနိုင်ငံက ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိုင်ငံခြားသားများအား ဆွဲဆောင်ရန် ကာလရှည်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အတည်ပြု
မနီလာ၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖဂန်ဒုက္ခသည်များအတွက် တံခါးဖွင့်ထားကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Teodoro Locsin က စက်တင်ဘာ ၈ ရက်ညပိုင်း၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“ခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အပါအဝင် အာဖဂန်ပြည်သူတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ တုန်လှုပ်မှုရှိနေသူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ မြဲမြံစွာ ရပ်တည်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခ၊ ဖိစီးနှိပ်စက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ သေဆုံးမှုတွေကနေ လွတ်မြောက်လာသူအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တံခါးတွေကို ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်” ဟု Locsin က တွစ်တာ၌ ရေးသားထားသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (DFA) က ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ “ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှု ဒါမှမဟုတ် ကျေးဇူးတင်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး” ဟု Locsin က ပြောခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ဩဂုတ် ၃၀ ရက်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်းပြီး ယင်းနိုင်ငံအား တာလီဘန်တို့ ထိန်းချုပ်လိုက်ချိန်မှစ၍ အာဖဂန်မှ ၎င်း၏နိုင်ငံသားများ ရွှေ့ပြောင်းရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် မတည်ငြိမ်သော လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် DFA က သတိပေးချက်အဆင့် ၄ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Philippines says ready to accept Afghan refugees
MANILA, Sept. 8 (Xinhua) — The Philippines has opened its doors to Afghan refugees, Philippine Foreign Secretary Teodoro Locsin said Wednesday night.
“We stay steady where others waver: tonight we welcome Afghan nationals including women and kids seeking refuge,” Locsin said on Twitter. “Our doors are open to those fleeing conflict, persecution, sexual abuse and death.”
Locsin said the Department of Foreign Affairs (DFA) will issueastatement on the matter, stressing “we’re not interested in publicity or thanks.”
The Philippines has started moving out its citizens from Afghanistan as the Taliban gained control of the country last month with the United States withdrawing its troops from Afghanistan on Aug. 30.
The DFA issued an alert level4for Afghanistan “due to the uncertain security situation in the country.” Enditem
(210828) — PESHAWAR, Aug. 28, 2021 (Xinhua) — Afghan refugee children play atarefugee camp in northwest Pakistan’s Peshawar on Aug. 28, 2021. (Photo by Saeed Ahmad/Xinhua)
တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းဆူးပြည်နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ အန္တရာယ်မြင့်မား၊ အလယ်အလတ်အဆင့်ဒေသများ ကင်းစင်
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကွန်ဒုဇ်ပြည်နယ်တွင် အိုင်အက်စ်တို့တည်ရှိမှုကို တာလီဘန် တာဝန်ရှိသူ ငြင်းဆို